Ilaina ve ny manitsakitsaka ny fenitra Google amin'ny fividianana rindrankajy PR?
Amin'izao fotoana izao dia mihabetsaka hatrany ny olona mitady fomba tsotra ahazoana fifamoivoizana amin'ny sehatr'izy ireo. Vonona ny handoavana rohy izy ireo ary hahazo ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny làlana maizina, manitsakitsaka ny fenitra momba ny fanavaozana Google. Ny fomba fiasa malaza sy miasa amin'ny fanatsarana ny mason'ny tranonkala iray amin'ny SERP dia ny mividy rindrankajy PR. Ity teknika ity dia lasa ezaka goavana ho an'ireo mpivarotra an-tserasera izay mikatsaka ny hampiakatra ny isa-tserasera.
Misy antony sasany mahatonga ny olona hanapa-kevitra ny handoa vola amin'ny backlinks. Anisan'ireo antony tena mahatsikaiky aho dia azoko asongadina ireto manaraka ireto:
Rehefa vita avokoa ny zava-drehetra dia tsy manana risika ianao mahazo sazy avy amin'ny milina fikarohana. Sarotra ny manavaka ny rohy mando sy tsy mandray karama raha misy mpanamboatra rohy manana fomba fiasa matihanina amin'ny famoronana taranaka.
fandrakofana nandritra ny folo taona
. Raha mieritreritra ianao fa mety hisy fiantohana tanteraka ny fanombohana satria manome tolotra goavana ho an'ny mpanjifa izy, dia diso ianao. Izy ireo dia manosika ny orinasa hividianana "backlinks PR" ambony.
fandikana ny fitsipika fa tsy lalàna
Raha manana kaonty ianao amin'ny iray amin'ireo sehatra media sosialy malaza toy ny Instagram, Facebook na Pinterest , mety ho tsikaritrao fa ny mpamorona (mpihira malaza, atleta, politika, sns. ) famoahana vokatra. Mamoaka ireo olona ireo ny orinasa noho ny dokam-barotra ataony ary manao izany eny an-kalamanjana. Raha manao izany izy ireo, dia tsy manapaka ny fitsipika, fa mahazo fotoana ahafahana mivezivezy amin'ny sehatr'izy ireo.
Rehefa manapa-kevitra ny hividy rohy amin'ny tranokalanao ianao dia tsy tokony hampiasa tranonkala fifandraisana na hiara-miasa amin'ny olona izay mivarotra rohy ampahibemaso. Ankoatr'izay dia mila misoroka eny an-tsena sy mpivarotra mailaka ianao amin'ny alàlan'ny toerana misy anao.
Ho solon'izany, tokony hifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra momba ny orinasa sy ny blôgy ary loharanom-pifaneraserana izay manaiky ny dokam-barotra. Na izany aza, miezaha hiala amin'ny fampiasana an-dàlam-panoratanao. Raha tokony ho izany dia tokony hojerena amin'ny votoatiny ny backlinks. Miaraha miasa amin'ireo mpanentana amin'ny atidoha ary manolotra azy ireo amin'ny vola avo lenta.
Raha manaraka ireo torohevitra ireo ianao, dia mahazo antoka ianao fa ny rohy nividiananao dia ao amin'ny tranonkalan'ny kalitao izay tsy vitan'ny fananganana kalitaon'ny rohy, fa koa mitondra fiara mifandraika sy manatsara ny fijerena marika.
Torohevitra mba hividianana bakalorea PR
Voalohany indrindra, zava-dehibe ny manamarika fa tsy tokony ho ny foiben'ny fanentanana fanorenana rohy. Ankoatra izany, alohan'ny hividianana rohy dia mila manao fanamarinana tranonkala iray ianao ary mamaritra ny sehatra fifaninanana misy azy. Ilainao ihany koa ny manara-maso ny valin'ny fanentanana fananganana rohy amin'ny fampiasana fitaovana azo ampiasaina toy ny Semalt Auto SEO.
Ny fomba voalohany ahafahana mahita finday bakalorea amin'ny tranokalanao dia ahitana tranonkala manaiky ny dokam-barotra na ny votoatin'olon-tokana. Azonao atao ny mahita loharanom-baovao toy izany amin'ny fampiasana modifier hafa sy fanaraha-maso an-tserasera. Manaova fanamafisam-peo amin'ny teny fanalahidy ary mampifanaraka izany amin'ny mpikaroka fikarohana sahaza. Ankoatra izany, azonao atao ny mifidy ireo fanovana modifier amin'ny fikajiana ny toerana sy ny tombontsoa amin'ny tsenan'ny orinasa sy ny orinasa Source .